mushaTHE WORLDAMERICA1 AmericaHyperloop Kushanda Musimboti
Hyperloop Kushanda Musimboti
27 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 1 America, AMERICA, THE WORLD, Railway, GENERAL, Fast Train, musoro wenyaya, VIDEO 0
Vanhu vakatama kwemazana emakore uye vakatora nzira refu munguva dzekutama uku. Mushure meiyi nguva uye mushure mekushandurwa kwemaindasitiri, mota dzinofamba-famba uye kugadzirwa kweinjini yekubatanidza yemukati yakatanga kushandisa mota nemabhazi. Gare gare, nekuvandudzwa kwendege, madaro ave akapfupikiswa, asi ikozvino kunouya hunyanzvi hweHyperloop (Hyperloop) Technology, iyo ichatsiva ndege, zvitima zvekumhanya zvakanyanya. Hyperloop yakabuda nekutanga kwaElon Musk, uyo anogona kunge ari mushambadzi ane simba zvakanyanya wenguva yedu.
Chii Hyperloop Technology uye Working Principle
Hyperloop ndeyekungotaura kuti kaputuru inodururwa muhubhu pasi pekumanikidza uye munzvimbo inenge ine zero zero. Iyo yakanyanya kumhanyisa 1300 km / h inosvika Hyperloop yakaenzana nekumhanya kwekurira. Ivo vachatanga kuyedza nguva iri pakati peLos Angles neSan Francisco, izvo zvinowanzo dzora 6-7 maawa kusvika 35 maminitsi.
Muchikamu chekutanga, 26 mamirioni emadhora akaiswa mari yezvidzidzo zviripo uye zvinonzi bhajeti iri richapihwa kusvika pamamiriyoni emamiriyoni e80.
1-Iyo capsule haina kusundirwa neiyo vacuum system, asi panzvimbo yemagetsi maviri emagetsi, kukurumidza kwe1300 km / h kunowedzera.
2-Izvo zvikamu zvehubhu zvakabikwa asi zvisina mweya zvachose, asi pachinzvimbo iyo tube (s) ine yakaderera kudzvinyirira.
3-Iyo compressor fan iri pamberi peHyperloop inotumira mhepo yakananga kuseri, uko mhepo cushioning inoitika ichitenderedza cushion, inotungamira mukukwirisa mukati mechikapu chehubhu, nekudaro ichipinda mukati mehubhu nekudzora kupokana.
4-Iyo solar panels inoiswa pane machubhu inopa simba mune dzimwe nguva.
Kunyanya Kufunga Hyperloop Kunoshanda Sei Kubva Ndege Ndege 08 / 12 / 2016 Mashandiro Ekukurumidza Hyperloop Kunyange Kubva kuPurani: Anopenga muzvinabhizimusi Elon Musk's train projekti 'Hyperloop', iyo inopfuura nekumhanya kwe1000 km neawa, iri kuenderera mumigodhi ineired. Turkey Innovation Week kuti kuuya hyperloop CEO Dirk Ahlborn, "Hakuna mukana mutsaona yakakonzerwa kukanganisa kwevanhu," akadaro. KUDZIVISA ZVISANGOBVA Pakutanga kwenyika ye tekinoroji ndiyo imwe yenzvimbo dzinokosha dzekutakura. Mazhinji mhinduro dzakagadziriswa, dzakaita sekutyaira dzisina mota kana madhiramu anotakura vanhu, uye kutoto shandiswa zvishoma nezvishoma muhupenyu hwezuva nezuva. Nekudaro, Elon Musk, anozivikanwa saanopenga muzvinabhizimusi weSilicon Valley, ndiyo tekinoroji yekufambisa yemakore anouya.
Hyperloop High Speed ​​Tube Kudzidzisa 1300 km inokwira nokukurumidza 04 / 03 / 2015 Hyperloop High Speed ​​Tube Kudzidzisa 1300 inokurumidza kusvika kumakiromita emakiromita: 643 mileage 30 super high speed tube tira inogona kushandiswa muU.SA pakati peSanfansisco neLos Angeles.Icho chinyorwa chinonyangadza che Hyperloop chinoratidzika kuva kubudirira mune teknolojia uye kutakura. . 643 km mumugwagwa 30 super high speed tube iyo inogona kufamba mumaminitsi inoshandiswa pakati peSanfansisco neLos Angeles muU.SA.Zvino chirongwa chinotyisa che Hyperloop chinoratidzika sechibudirira mu teknolojia pamwe nekufambisa. Iye ndiyewo mubatanidzwa we Hyperloop, Tesla, SpaceX uye PayPal.
Hyperloop inotanga kuongororwa pa2016 18 / 09 / 2015 Hyperloop inotanga kuongororwa pa2016: Hyperloop Technologies, kambani yakagadzirirwa Hyperloop teknolojia, iyo inotsanangurwa se Ultra Speed ​​Train, ichasvika kune iyo CEO uye inotanga kuedzwa mu 2016. Hyperloop teknolojia, iyo yakatangwa mumwedzi mishomanana yapfuura, yakakwanisa kukwezva kutarira kubvira pazuva razvakaziviswa seyekurumidza-kutengesa matavi emangwana. Rwendo urwu runotora nguva inenge maawa matanhatu, runokwanisa kukonzera kusvika maawa maviri nehafu. Elon Musk, mubatanidzwa we SpaceX naTesla, mumwe wevatsigiri vepamusoro pechirongwa ichi nepace yake yakasimba SpaceX. Chero gasi, isina petroli yakasunungurwa ...
10 ne Hyperloop 1 km kwechipiri 22 / 12 / 2015 10 mumasekonzi chete hyperloop 1? Km nokukurumidza Rwendo kuita: Tesla uye SpaceX muvambi US billionaire Elon musk, ane refu nguva anga achishanda akaita akatanga nzira itsva pakufamba hyperloop Muzana 2013 uye hyperloop 's vaizova nokukurumidza uye nzira isingadhuri chokufambisa kubva kumusoro-nokukurumidza chitima akati. Zvisinei, pfungwa iyi chaizvo rakachenuruka rakabayirwa pfungwa sokurota uye rimwe kuwedzera mugungwa hyperloop chirongwa yakarira. 2015 gore rakapera uye ari nhau itsva akabuda pamusoro hyperloop. Elon musk; 'Tiri kushanda mabasa muna mberi 500 kushanda pamwe rangu hyperloop uye pedyo ...
Nhanho yekutanga yekutakura scuba yekutakura Hyperloop 11 / 01 / 2016 Danho rokutanga riri kutorwa neHyperloop. Mugwagwa wokuedza weKilometeri we4.8, unovakwa murenje reNevada, uchapedzwa pamagumo e2016. Nhanho yekutanga inotorwa kuHyperloop, iyo inopa huwandu hwekufamba kwe1126 km neawa. Mumwe muzvinabhizimisi weAmerica, Elon Musk, uyo akaita zvitsva zvitsva nemakambani ake eTesla Motors uye SpaceX, ari kugadzirira kutora danho rokutanga rokutakura sangano rinosanganisira air pressure cylinders, raanorondedzera sechishanu yekutakura mushure mhepo, gungwa, mumigwagwa uye mota. 2016 INOGADZIRWA MUNYIKA ITSVA Maererano neshoko rekambani, kuvaka kweSouth-built 4.8 yekuyera kwemakiromita murenje reNevada ichapedzwa pamagumo e2016. Company ...
Hilal Bandırma Line Electrization Inoshanda Tender Mhedzisiro
Izmir naIstanbul Vanosangana kuHakanaka, Hasret Inopera
Kunyanya Kufunga Hyperloop Kunoshanda Sei Kubva Ndege Ndege
Hyperloop High Speed ​​Tube Kudzidzisa 1300 km inokwira nokukurumidza
Hyperloop inotanga kuongororwa pa2016
10 ne Hyperloop 1 km kwechipiri
Nhanho yekutanga yekutakura scuba yekutakura Hyperloop
Istanbul-Ankara Ne Hyperloop Inova 25 Minutes (Video)
Bullet Train Hyperloop Yakatanga Kuedzwa (Vhidhiyo)
Hyperloop inotakura mumotokari pamwe nemunhu
Hyperloop Mumwe Anopa Revolutionary Project muIndia
Nhau Archive Sarudza mwedzi October 2019 (305) September 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (633) June 2019 (504) May 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) February 2019 (483) January 2019 (502) Range 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (581) May 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) February 2018 (500) January 2018 (557) Range 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) May 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Range 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) May 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Range 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (535) May 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Range 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) June 2014 (735) May 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Range 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) May 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Range 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) June 2012 (591) May 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Range 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) May 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Range 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) May 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Range 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) May 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) May 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Range 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) May 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Range 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) May 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Range 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) May 2004 (2) Range 2003 (1) October 2003 (1) May 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Range 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) May 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) May 1995 (1) August 1992 (1) May 1990 (1)